Mey 19, 2018 Admin
Coincheck mitady fankatoavana avy amin'ny Japoney dalàna & US drafitra fanitarana
Under new leadership after a fire sale to brokerage Monex Inc., Coincheck has been spending heavily to improve security and restore confidence among clients who withdrew at least $540 tapitrisa eo taorian'ny ny Hack. Tao anaty tafatafa, Monex Lehiben'ny Mpanatanteraka Mpiandraikitra Oki Matsumoto nilaza fa manantena ny fifanakalozana mba hahazoana fahazoan-dalana ofisialy tao Japana volana manaraka. Izy ihany koa mikasa ny hitondra ny sehatra Coincheck America.
Matsumoto tamin'i hoe "Afaka hanitatra ny mpanjifa fototra amin'ny Coincheck.”
Bitmain an-dalana T ...